Saddex Maalmood Ka Hor Finalka Copa Del Rey-Ayaa Tababarkii Maanta Ee Barcelona Ka Maqnaa? Ayaase Soo Laabtay? - Gool24.Net
Saddex Maalmood Ka Hor Finalka Copa Del Rey-Ayaa Tababarkii Maanta Ee Barcelona Ka Maqnaa? Ayaase Soo Laabtay?
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa kooxdiisa u diyaarinaya finalka Copa Del Rey ee ay Valencia kula ciyaari doonaan magaalada Seville.
Barcelona ayaa doonaysa in ay sanadkii shanaad oo oo xidhiidh ah ku guulaysato koobka ay afarta sanadood ee ugu danbeeyay iska soo yeesheen ee Copa Del Rey balse markan waxa uu Valverde la dhibtoonayaa taam la’aansho kooxdiisa haysata.
Iyada oo warbaahinta Spain ay wali sheegayaan in ciyaartoyda Barcelona ayna wali ka soo kabsan qalbi jabkii Champions league ee Anfield ku soo gaadhay isla markaana ay wali maskaxdooda ku jirto wixii ay Liverpool kala soo kulmeen ayuu Valverde doonayaa in ay Copa Del Rey isku ilawsiiyaan.
SIDOO KALE AKHRISO: Frank Lampard Oo Ka Hadlay Xaaladaha N'Golo Kante, Antonio Rudiger iyo Willian Iyo Walwal Cusub Oo Uu Abuuray.
Tababarkii maanta ee Barcelona waxaa ku soo laabtay Philippe Coutinho oo toban maalmood ka hor uu dhaawac ku soo gaadhay kulankii Getafe ee horyaalka La Liga.
Coutinho ayaa ku soo laabtay waqtigii loo qabtay wuxuuna qaatay qaybtii kowaad ee tababarkii maanta oo arbaco ah, laakiin Luis Suarez ayay hubaal noqotay in uu si rasmi ah u seegayo finalka Copa Del Rey ee Valencia.
Luis Suarez ayaa qaliin jilibka ah maray kadib dhaawac ku soo gaadhay kulankii Liverpool ee Champions League waxa kale oo wali tababarka Barcelona ka maqan Ousmane Dembele kaas oo hadda loo badinayo in uu isna seegayo finalka Copa Del Rey.
Laakiin Valverde ayaa tababarkii maanta ee kooxdiisa waxa uu ku soo daray lix ciyaartoy oo da’yarta kooxda Barca B ka tirsan kuwaas oo kooxda inteeda kale tababarka la qaatay.
Goolhayaha da’yarka ah ee Iñaki Peña, difaaca midig ee Moussa Wague, khadka dhexe ee Oriol Busquets & Riqui Puig, iyo gool dhaliyaasha Carles Perez iyo Abel Ruiz ayaa maanta tababarka kowaad kowaad ka qayb qaatay.
Difaaca Jean Clair Todibo ayaa seegay tababarkii maanta wuxuuna awoodi kari waayay in uu qayb ka noqdo diyaar garowga Copa Del Rey isaga oo la sheegay inuu gurigiisa joogay.
Intii lagu jiray tababarkii maanta oo arbaco ah ee Barcelona waxay ciyaartoyda Blaugrana u hambalyeeyeen Arturo Vidal oo maalinta dhalashadiisa ku beegnayd.
Goolhaye Jasper Cillessen ayaa diyaar garowgii finalka Copa Del Rey si wayn uga dhex muuqday iyada oo Marc-Andre ter Stegen uu wali dhaawac ku maqan yahay.
Lionel Messi, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Sergio Busquets iyo ciyaartoyda muhiimka ah ee Barcelona ayaa qayb ka ah diyaar garowga finalka Copa Del Rey ee sabtida ay Barca la ciyaari doonto Valencia.